रायोका साग खानुका फाइदाहरु - Likhu Online
रायोका साग खानुका फाइदाहरु
४ मंसिर २०७७, बिहीबार ०६:३५ प्रकाशित
काठमाडौं: जाडो महिनाको सुरुवात भए पछि हामीले खानामा बिषेश ध्यान दिनु पर्छ । किनभने कतिपय खानेकुराहरु जाडो मौसममा खानाले शरीरलाई हानी नोक्सानी गर्न सक्छन् । जाडो मौसममा त्यस्ता खानेकुरा खानुपर्छ जसले हाम्रो शरीरलाई ताप प्रदान गर्छन् । त्यस्तै जाडो मौसमका लागि अत्ति उपयोगि तरकारी हो रायोको साग । रायोको सागसँग जो कोही परिचित हुन्छन् ।
यसलाइ नरुचाउँने व्यत्ति पनि बिरलै होलान् । यो साग धेरैलाई मा पर्छ र यो खानुका पनि धेरै फाइदाहरु रहेका छन् । साग खाँदा भिटामिन पाइन्छ भन्ने पनि सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । यो मौसममा रायोको साग जताततै पाईन्छ । रायोका साग बढी पोषणयुक्त तरकारीमा रायो पर्छ। यो स्वास्थ्यका दृष्टिले पनि अत्यन्त फाइदाजनक हुन्छ ।
रायोको साग खानुका फाइदाहरु थाहाँ पाउँनुहोस्:
१. रायोको सागमा भिटामिन सी पनि पाइने भएकाले रुघाखोकी लागिरहने व्यक्तिलाई पनि फाईदा पुर्याउदछ ।
२. रायोको सागमा भिटामिन ए प्रशस्त मात्रामा पाइने भएकाले रतन्धो, पुरानो बाथ, आदिबाट बचाउँन मदत गर्दछ ।
३. रायोको सागमा पाइने फोलिक र म्याग्नेसियमले मानव शरीरमा रहने विभिन्न अनावश्यक वस्तुलाई बाहिर निकाल्ने गर्छ ।
४.रायोको सागमा भिटामिन के प्रचूर मात्रामा पाइने हरनाले यो साग गर्भवतीका लागि अत्ति उत्तम मानिन्छ ।
५. जाडोमा बाथका रोगीलाई हड्डी र गोडा दुख्ने समस्या हुने भएकाले रायोको साग सेवन गर्नु पर्छ । किनभने यसमा पाइने कपरले यस्तो मस्याबाट बचाउँदछ ।
६.रायोको सागको नियनित सेवन गर्नाले पिसाबनलीमा हुने पत्थरीलाई र क्यान्सरको जोखिमबाट बच्न सकिन्छ ।
शारीरिक सम्पर्कको लागि उपयुक्त उमेर कति ?
यौनका रोचक कुरा ( विवाहितले मात्रै पढ्नु होला)
थाइरोइड भनेको के ? यसमा आयोडिनको कस्तो भुमिका हुन्छ ?
मह र लसुन मिसाएर खानुका फाइदाहरु
यसरि पानी पिउनुहोस र तौल घटाउनुहोस
शारीरिक सम्पर्क गर्दा हुने १२ फाइदाहरु
दम रोग कसरि लाग्छ? देखिने लक्षण र बच्ने उपाय
यौनलाइ जीवनको महत्त्वपूर्ण पाटो किन मानिन्छ ?
बच्चाको लागि लोकल कि ब्रोइलर स्वास्थ्य बर्धक?
के हो महिलामा देखिने लुपस बाथ? यसका लक्षण र उपचार बिधि
अमेरिकाद्वारा नेपाललाई भेन्टीलेटर हस्तान्तरण ।
रुघा खोकी हटाउने सजिलो ८ घरेलु उपायहरु, जानि राखौं
कोरोना भाइरस (कोभिड) १९ विरूद्धको प्रभावकारी भनिएको खोपको नेपालमा भण्डारण क्षमता शून्य